भाडामा बस्नेले विद्युत् महसुल छुट पाउँछन् भन्नुहुन्छ : ऊर्जामन्त्री पुन , सक्दो शेयर गर्नुहोस!::Point Nepal
भाडामा बस्नेले विद्युत् महसुल छुट पाउँछन् भन्नुहुन्छ : ऊर्जामन्त्री पुन , सक्दो शेयर गर्नुहोस!
को,रोना वि,रुद्धको ल,डाइँ जि,त्नका लागि सरकारले लकडाउन गरेको छ । सोही क्रममा नागरिकलाई रा,हत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई २५ प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने नि,र्णय गरेको छ । यस्तै लकडाउनमा सञ्चालन हुने उ,द्योगलाई समेत ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने नि,र्णय गरेको छ ।
यस्तै, यही विषम् अवस्थामा केही ठूला आयोजनासमेत सञ्चालन गर्ने नि,र्णय गरेको छ । यसै सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले विशेष अन्तर्वार्ता गरेको छ । रमेश लम्सालले मन्त्री पुनसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश: सरकारले विशेष गरी विद्युत्को खपत बढाउने लक्ष्यका साथ महसुल छुट दिने महत्वपूर्ण नि,र्णय गरेको छ । यो नि,र्णयको पछाडिको खास का,रण के होला ? को,रोना भा,इरसले विश्व आ,क्रान्त छ । त्यसको प्र,भाव हामीलाई पनि प्रत्यक्ष परेको छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा दैनिक जीवनमा पनि प्र,भाव परेको छ । त्यसो हुँदा अ,प्ठ्यारो परेका जनतालाई रा,हत दिने उद्देश्य राखिएको छ । कूल १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने परिवारलाई छुट दिने भन्ने नि,र्णय भएको छ । हामी ग्यास आयात गरिरहेका छौँ । लकडाउनको समयमा प,र्याप्त आपूर्ति त भएको छ । तैपनि विदेशबाट डलर तिरेर ग्यास ल्याउने र घर घरसम्म पु-याउने विषय आफैँमा बोझिलो पनि छ । यस आधारमा स,ङ्क्रमणको ख,तरा छ । घर घरमै पुगेको बिजुलीमा नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर हामीले नि,र्णय गरेका हौँ ।
१५० यूनिट भनेको सामान्यता पाँच जनाको परिवारमा दैनिक तीनदेखि पाँच यूनिटसम्म खर्च हुँदो रहेछ, इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा । त्यतिसम्म छुट दियो भने हामीसँग भएका कूल ४३ लाख ग्राहकमध्ये झण्डै सबै ग्राहक समेटिन्छ । दुई लाख जति ग्राहक सो प,रिमाणभन्दा बढी प्रयोग गर्ने छन् । त्यसो गर्दा समेत उनीहरुलाई पनि १५० यूनिटमा छुट दिन सकिन्छ । अ,प्ठ्यारो अवस्थामा राहत दिने उद्देश्य राखिएको छ । यसैबाट ग्यासलाई विस्तारै विद्युतीय चुल्हो वा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगतर्फ लैजान सकिन्छ भनेर यो नि,र्णय गरिएको हो ।